गित - याहां कोही भेटिएन
गजल - मेरो मनलाई तड्पाइ
एक छिन हासौंन - ३
हस्त गौतम म्रिदुल
कयौं दियोको बली चढाएं अन्ध्यारो नै मेटियन।
देशलाइ नयां गति दिने यहां कोही भेटिएन॥
यावत ति दु ख दर्दहरु मुन मुन पो बल्झिए।
स्वाभीमानमा चोट पु रयाइ स्वार्थमै अल्झिए।
राष्टीय स्वरुप फेरिएन फेरिया केवल बिधिहरु।
संधै ओमुेलमा परि रहे अमल्य तिनै निधिहरु
कयौं आशाको बली चढाएं अन्योल नै मेटिएन।
देशको नयां खाका कोर्ने यहां कोही भेटिएन॥
शहिदका सप्ना कुल्चिय जनताको चाहाना टुटे।
स्वतन्त्रताको उज्यालोलाइ आपसमा मिलि लुटे।
आखिर कोही रहेनछन आमाको नै आशु पु छने।
निहित स्वार्थलाइ त्यागेर यो देशको मर्म बु मु्ने।
कयौ सुखको बली चढाएं ज्यादती नै मेटियन।
देशमा नयां आयाम थप्ने यहां कोही भेटिए
मेरो मनलाई तड्पाइ तिमीले छली गयौ
मलबिनाको बिरुवाझै ,रुखो बनाइ ढलिगयौ ।
बस्छु भन्थ्यौ मेरो मनमा जीवनभरी म सँगै
थाहा नदि सुटुक्क, एक्लो बनाइ चलिगयौ ।
बसन्तको पालुवा झै हाम्रो माया हुन्छ भन्थ्यौ
त र किन खडेरी भै उजाड बनी जली गयौ ।
अटल, अजर राख्छु भन्थ्यौ पिरतिको कथालाई
तर हिउंको पहाड झै छणभर मै गली गयौ ।
ओह !अगाडी मैले त महिलाहरुको श्रीङार-पटारको कुरा गर्दागर्दै देशको कुरा निकालेर टुङ्याएकी थिए । यही प्रसँगमा मलाई म अमेरिका शुरुमा आउँदाको महिलाहरुको ब्युटीपार्लरको झझल्को आयो। म शुरुमा आउँदा मैले काम गर्ने ठाउँको अर्को पट्टी ब्युटिपार्लर थियो। त्यहा आउने कस्टमरहरु सब ४० देखी ७५ कटेका थिए यत्ती सम्म कि कोही त हिंड्न नसकेर समातेर ल्याउनु पर्ने खालका र कोही भने दमको रोगले सिकिस्त भएर अक्सिजनको सिलिन्डर समेत् झुन्ड्याएर आउनेहरु पनि थिए। अब भनौ न,त्यस्ताहरुलाई के को श्रीङार पटार?, तर पनि उनिहरुले पार्लर धाउनै पर्ने। अब यस्तो कुरा चाँही सोच्नै पर्नेहुन्छ यो उनिहरुको बाध्यता हो वा रहर ? त र फेरी यस्ता उमेरकाहरु भए पनि उनिहरुलाई मद्घत गरौ भन्ने हिसाबले यसो समात्न मद्घत गर्न खोज्यो भने त ''आई एम ओ के ''भन्छन यस्को अर्थ यही हो कि म आँफै सक्षम छु भन्न खोजेको हो । समग्रमा भन्नु पर्दा उनिहरुको आशय यही हो कि उमेरले म कमजोर छैन भन्ने । यता हाम्रो पट्टी सोच्ने हो भने ४० कटेपछी त उखान टुका भर्न थालछन ।'' घरले जा जा बनले आइज'' भन्नेबेला भैसक्यो । बुढेसकालमा के को नक्कल ?! नक्कल मात्र बुढेसकालमा त्याग्नु परेको भए त हो । तर ---गत्ती नै छाडिन्छ र पो त फसाद !अब बिचार गरौ न सोचाइ फराकिलो भएमा मात्र पनि जीवन भोगाइमा फरक पर्न आउदो रहेछ त्यसैले हामीले पनि सहि कुरालाई भने आत्सात गर्न जरुरी ।क्रमस :